केपि-प्रचण्डको दोहोरी ब्याटल - DURBAR TIMES
HomeLiteratureकेपि-प्रचण्डको दोहोरी ब्याटल
केपि-प्रचण्डको दोहोरी ब्याटल
प्रचण्ड – आराम हुनुहुन्छ ?
ओली – पखालाकाे औषधी खुवाएर बजारतिर कुदाउने अनि आराम बिराम साेध्ने ?
प्रचण्ड – कब्जियत भयाे भनेर किन उफ्रेकाे त ?
ओली – वैचारिक कब्जियत भयाे, समाधान निस्केन भनेकाे । त्यति नबुझ्ने ?
प्रचण्ड – मने निश्चितरूपमा, पाटी फुटाउँ भन्नुभएको हाे ?
ओली – दाेबाटाेमा उभ्याएर बाइबाई गरेपछि खुरुक्क बुझेर जाने कि जाउँ ? जाउँ ? भन्दै साेधिरहने ? टाप ठाेक्नुपर्छ नि ?
प्रचण्ड – तपाईं निष्ठुरी हुनुहँदाे रहेछ ! पाटी एक्लै चलाउनुभयाे ।
ओली – त्यत्राे अध्यक्ष पद दिएँ त तपाईंलाई । भङेराे मारेर पनि दिएँ, अब भुत्ल्याइदे त नभन्नुस् न ! आफै भुत्ल्याउनुस्, नसके दालसित भात खानुस् ।
प्रचण्ड – आउनुस्, चिया पिउँ ।
ओली – पिउँछु तर मेराे मान्छेले पकाएर दिनुपर्छ । दूध बडा चिनी कडा ।
प्रचण्ड – गुलियाे नपिउनुस्, सुगर लाग्न सक्छ ।
ओली – अच्छ्युँ खाएँ, बच्छ्युँ खाएँ, झुसे बारूलाे ! किड्नीले निहुँ खाेज्दा त जितिरहेकाे छु, जाबाे सुगर !
प्रचण्ड – अनि, सुनाउनुस् । अरू के छ खबर ?
ओली – के हुनु ? एकातिर तपाईंको कचकच, अर्काेतिर माधव नेपालकाे कचकच । दुई स्वास्नीकाे पाेइ कुना पसी राेई जस्ताे भइयाे । चित्त बुझाउनै नसकिने ।
प्रचण्ड – हाहा, मने निश्चितरूपमा । तपाईंले आफ्ना सहकर्मी त मिलाउन गाह्रो मान्नुभयाे, मैले त्यत्रा जनसेना कसरी मिलाएर राखेँ हाेला ?
ओली – धान छरेपछि परेवा कसरी भुल्छन् मलाई थाहा छैन ? नसिकाउनुस् न !!
प्रचण्ड – तपाईंले पनि त कनिकै छर्नुभएकाे छ नि ! कसैलाई रेलवेकाे प्रबन्धक, कसैलाई ट्रष्टकाे सदस्य बनाउनुभाे, हामीलाई थाहा छैन ?
ओली – हातमा डाडुपनियाे भएकाे बेला, आफ्ना केटाकेटीलाई पेटभरी खान नि नदिनु त ?
प्रचण्ड – तपाईंकालाई मात्रै खुवाउने ? हाम्रालाई नदिने ?
ओली – अलिअलि दिएकै छु त, साैताकाे छाेरालाई खान दिनु ठुलाे कुरा हाे, पेट भरिनु नभरिनु त त्यस्तै हाे ।
प्रचण्ड – जुन दिन डाडुपनियाे मेरा हातमा आउँछ नि, कसरी पस्किनुपर्छ मलाई थाहा छ !
ओली – डाडुपनियाे भाँचेर छाेड्छु नि हाै, मान्छे त म नि अल्ठ्याङ छु नि !
प्रचण्ड – हेराैँला !
ओली – हेर्नुहाेला !!
गाउँका एकजना हजुरबुबाले भन्थे – बिहीबार नङ काट्न हुन्न । नकाट् !! उतिबेला आफुलाई निकै प्रगतिशील मानिन्थ्यो, टेरिएन ।तर,त्याे एकदमै वैज्ञानिक कुरा रहेछ, वैज्ञानिक कारण सहितकाे कुरा रहेछ । कुनैअन्धविश्वास या धार्मिक प्रचलन हाेइन रहेछ । अलि ठूलो भएपछि, मैले तिनै हजुरबासँग साेधेँ – ”हजुरबुबा ! किन …
Previous articleचिनियाँ रक्षामन्त्री काठमाडौँमा
Next articleएउटा हातमा राजनीति र अर्काे हातमा उद्यम रोजगारीको झण्डा बोकौँ: मन्त्री ढुंगेल